हरेक grower हरियो पाल्तु जनावर सकेसम्म आँखा खुसी हुन चाहन्छ। र तिनीहरूलाई हेरचाह विभिन्न ड्रेसिङ बिना माटो loosening टीन र धेरै अन्य के गर्न सक्दैन। केही अनुभवी "सहकर्मी" को सल्लाह मा बिरूवा प्रजनन मा मैनुअल, अरूलाई पढ्न, र अझै पनि अरूलाई लगभग पूर्ण, अनियमित सामान्य सिद्धान्तअनुसार निर्देशित छन्। र ढिलो होस् वा चाँडो, सबैलाई अर्को गमला सारियो गर्न आवश्यक के गर्न आउँछ। जो बिल्कुल यो आवश्यकता लागि कारण बारे सोच छैन, र कसैले बस यस मामला लागि केही विशेष नियमहरू अझै पनि अवस्थित भनी विश्वास, transplanting houseplants लागि अनुकूल दिन टिप्न सुरु, बिना कुनै हिचकिचाहट यसलाई गरिरहेको छ। समय transplanting को प्रश्न गर्न स्पष्ट जवाफ त सरल छैन: सबैलाई यो वसन्त गर्न राम्रो छ भनेर थाह, तर कुनै थप। हामी के गर्न सक्छौं, हरी आफ्नो मनपर्ने पाल्तु जनावर चोट छैन?
र, वास्तवमा, किन?
पहिले तपाईं बुझ्न आवश्यक: के तपाईं फूल प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक छ? सबैभन्दा तर्कसंगत र सरल व्याख्या - फ्रेम को जरा फिट हुनेछ। साँच्चै, बोट यसको वृद्धि रूपमा जराको आकार मा बढ्छ, यसलाई बिस्तारै जो उसलाई धेरै हानिकारक असर सबै एउटा सानो पट यो छुट्याइयो त्यसपछि फूल पूर्ण विकास गर्न सक्दैन ठाउँ, लाग्छ।
तर वास्तवमा, सबै कुरा धेरै गम्भीर छ। समय, एक पट मा माटो संरचना नै परिवर्तन, यो धेरै denser बन्नेछ। फलस्वरूप, जरा गर्न अक्सिजन को कम प्रवाह र पानी भारी अवशोषित। स्वाभाविक आवश्यक पदार्थ को यस्तो घाटा संग कुनै पनि फूल बिरामी पर्छन् र मर्छन् गर्न सक्नुहुन्छ। houseplants transplanting लागि अनुकूल दिन, तिनीहरूले केही स्रोतहरु भन्न रूपमा, केवल आफ्नो स्थिति भर पर्छन्। स्पष्ट छ, सबै कुरा धेरै खराब छ भने, यो आवश्यक छैन केही विशिष्ट तिथि लागि प्रतीक्षा छ - तपाईं सकेसम्म पुनर्जीवित गर्न आवश्यक छ।
ठ्याक्कै प्रत्यारोपण कसरी?
एक बिरूवा पनि प्रत्यारोपण गर्न, सक्षम हुन आवश्यक छ। पहिले, यो जरा बढ्न मौका थियो कि ठूलो पट लिन सबै भन्दा राम्रो छ। अन्यथा, तपाईं बस धीरे जरा केही हटाउन सक्नुहुन्छ। तुरुन्त स्थानान्तरण अघि नरम हुन्छ भनेर, पृथ्वी पानी आवश्यक छ। त्यसैले यो माटो बाट फूल हटाउन सजिलो हुनेछ। त्यसपछि पहिले नै सिर्जना गरेको छ जो एक ड्रेनेज सिस्टम नयाँ पट, मा बोट सार्न, र माटो को पहिलो पत्र फैलियो। यो पहिलो नजर मा देखिन्छ रूपमा यो रूपमा गाह्रो छ।
तर जसको लागि फूल जीवन केही चरणमा मा उत्पन्न तपाईं houseplants प्रत्यारोपण गर्न सक्नुहुन्छ जब क्षणमा, अनुकूल दिन हो।
आमा प्रकृति मा ल्यान्डमार्क?
धेरै उत्पादक कुनै पनि विशिष्ट तालिका ख्याल गर्न सल्लाह छन् र हरियो पाल्तु जनावर को राज्य द्वारा निर्देशित हुन। यो मार्च मा houseplants transplanting लागि अनुकूल दिन एक तस्वीर फेला पार्न भनेर स्पष्ट छ। आखिर, वसन्त, मा बढन फूल को सबै भन्दा सक्रिय बढ्न तिनीहरूले जब थाल्छन्। तर यहाँ पनि, त्यहाँ अपवाद हुन्छन्। यसले सम्पूर्ण फूल कमजोर हुँदा, सक्रिय फूल पछि जराको स्पर्श गर्दैन। यसैले निम्न सल्लाह: वसन्त प्रत्यारोपण गर्न ती बोट कि हिउँदमा ब्लूम लागि धेरै उपयोगी छ।
चंद्र पात्रोको सिफारिसहरू
houseplants transplanting लागि अनुकूल दिन, केही मानिसहरू अनुसार, निर्भर चन्द्र को चरणहरु। पृथ्वीको उपग्रह, हामी थाह छ, प्रकृति मा घटना को एक नम्बर संचालित, यो प्रभावित हुने छैन र किन छ? फूलहरु यो बेला हरियो पाल्तु जनावर संग विभिन्न manipulations गर्न सबै भन्दा राम्रो छ भनेर भन्न चन्द्रमा बढ्दै। स्थलीय (वृष, भर्जिन, मकर) र पानी (क्यान्सर, बिच्छी माछा): यसबाहेक, यो राशि केही संकेत को प्रभाव अन्तर्गत हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, अप्रिल 2015 मा houseplants transplanting लागि शुभ दिन: 1-2, 5-7, 10-11, 14-15, 18-19, 23-24, 28-29 - कि, दुर्लभ अपवाद संग लगभग सम्पूर्ण महिना छ।
प्रत्यक्ष फ्रिक्वेन्सी: सट्टा एक निष्कर्षमा को
ठ्याक्कै कसरी आफ्नो मनपर्ने फूल बस जो कोहीले बताउन छैन repot गर्न। सायद यो प्रश्न floriculture मा गम्भीर संलग्न निर्णय गरेको छ जो हरेक व्यक्ति लागि फरक छ। यसलाई त्यहाँ आफ्नो आवृत्ति सन्दर्भमा केही nuances हो, यसबाहेक, प्रत्यारोपण आवश्यक छ भनेर indisputable छ।
बढ्दै बिरुवाहरु (violets, Chlorophytum) को "निवास" कम्तिमा एक पटक एक वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो सबै कसरी आफ्नो जराको धेरै छिटो विकास हुनेछ निर्भर गर्दछ। "पुनः स्थापित" तिनीहरूले दुई वर्ष मा एक पटक भन्दा कुनै थप आवश्यक - पाल्तु जनावर रूखहरू (उदाहरणका लागि खजुरका,), कैक्टस र सुनगाभाहरू यस्तो हतारमा बच्न असम्भाव्य छन्। तर यो मामला मा, सबै व्यक्तिगत - रोग वा अनुपयुक्त अवस्था धेरै पहिले प्रत्यारोपण हुन सक्छ।
बैंगनी र उज्ज्वल र minimalist पहाडी - - निश्चित नियम र उचित हेरविचार, कुनै पनि फूल विषय लामो समय को लागि आँखा प्रसन्न हुनेछ। कुनै पनि विशिष्ट समयतालिका पछि लाग्न र houseplants transplanting लागि अनुकूल दिन बोट नै राज्य मा केवल निर्भर भनेर बुझ्न छैन - यो त्यहाँ, कुनै सख्त नियमहरु छन् भन्ने सबैभन्दा आधारभूत जो केवल सिफारिसहरू, हो सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
वसन्त मा माटो को Deoxidation। माटो अम्लता कम गर्न पाँच तरिका
भाइरस तपाईंको कम्प्युटर कसरी सफा गर्ने? सुझाव र चाल
सेतो गुलाब: पछिल्लो र वर्तमान को मूल्य
रूस बस्न सबै भन्दा राम्रो शहर के हो? राम्रो जीवन बिताउन रूस मा जहाँ?
सिरेम्यान समाधान: प्रयोगका लागि निर्देशनहरू, समीक्षाहरू
थुमा पकाउन कसरी स्वादिष्ट गर्न? व्यञ्जनहरु
तपाइँको IP कसरी परिवर्तन गर्न, र यसले के गर्छ
कसरी लेनोभो ल्यापटप वाइफाइ सक्षम र वितरण समायोजन गर्ने?
Bedsores। व्यवहार र कसरी रोक्न भन्दा।